पहिचान नखुलेका ७१ शवहरु भेटिए भारतको गंगा नदीमा « Yoho Khabar
असार ७, २०७८ सोमबार / Mon Jun 21, 2021
पहिचान नखुलेका ७१ शवहरु भेटिए भारतको गंगा नदीमा
काठमाडौँ – बेवारिसे शव भारतको विभिन्न स्थानमा भेटिन थालेको छ । पछिल्ला केही दिनयता गंगानदीले बगाएका पहिचान नखुलेका र कहाँबाट आयो भन्नेसमेत यकिन नभएका यस्ता शवहरु भारतको उत्तरप्रदेश र बिहार जस्ता ठाउँमा पर्ने गंगा किनारमा भेटिन थालेको हो ।
आम रूपमा गंगामा मृत चौपायाहरु भेटिनु सामान्य जस्तै थियो । तर कोरोना महामारीको बीचमा यति धेरै बेवारिसे शव भेटिनुलाई भने चिन्ताको विषय मानिएको छ । पछिल्लो पटक भारत बिहारमा अवस्थित गंगा नदी किनारमा बेवारिसे ७१ शव भेटिएका छन् । यसअघि पनि उत्तर प्रदेशको गाजीपुर जिल्ला र बलिया बिहारको सीमामा पर्ने गंगा नदी किनारमा क्षतविक्षत अवस्थामा दुई दर्जन बढी शव भेटिएका थिए ।
पछिल्लो पटक महादेव घाटमा भेटिएका ७१ शवहरु बक्सर जिल्ला प्रशासनले पोष्टमार्टमपछि खाल्डोमा गाडेको छ । तिनको डिएनएको नमूना भने सुरक्षित राखिएको छ । ती शव कसका हुन् र कहाँबाट यति धेरै जम्मा भए भन्ने खुलेको छैन । अहिले वर्षाको बेला नभएको र नदीमा जल सतह घटेकाले बाढीले बगाएर ल्याएको भन्ने अनुमान पनि गर्न नसकिने स्थानीय अधिकारीहरु बताउँछन् ।
संवैधानिक निकायका अधिकारीहरुको अवस्था के हुन्छ ? अवैध नियुक्तीमा ओलीको हात
१६ डिआइजीको सरुवा, कसको सरुवा कहाँ भयो ? (सूचीसहित)
विश्वकप हेर्न आउने दर्शकलाई कोरोनाको खोप
काठमाडौँ – सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ । नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवाद सँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट